डन दीपक मनांगे भन्छन्, 'मनाङमा माओवादी जिरो भइसक्यो, एमालेको ८० मत छ, मै जित्छु' - Medianp
डन दीपक मनांगे भन्छन्, ‘मनाङमा माओवादी जिरो भइसक्यो, एमालेको ८० मत छ, मै जित्छु’
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २९, २०७४१३:१६0
काठमाडौं, २९ कात्तिक । मनाङबाट प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दीपक मनांगेले आफूले चुनाव जित्ने दाबी गरेका छन् । आफू खाँटी मनांगे भएकाले चुनाव जित्ने उनको भनाइ छ ।
हालै एक साप्ताहिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘पाल्देङ गुरुङ, टेकबहादुर गुरुङभन्दा म नै खाँटी मनांगे भएकाले जितुँला नि । मेरो उपनाम नै मनांगे भएपछि मैले त्यसै जित्नुपर्ने हो । म यहाँको खास बासिन्दा हुँ ।’
उनले मनाङमा माओवादी जिरो भइसकेको थियो, कांग्रेससँग मानिसहरू असन्तुष्ट रहेको र एमालेको जम्मा ८० वटा मात्र भोट भएकाले आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । ‘मलाई पार्टीबाट होइन, स्वतन्त्र लड्नुपर्छ भन्ने मनाङका जनता तथा केटाहरूको सर्त थियो, मैले त्यसैलाई स्वीकार गरेको हो । यसपटक मनाङ आएपछि एमालेले राम्रो काम गरेको देखें, एमालेले आफ्नो संगठन बलियो बनाएको रै’छ । एमालेले राम्रो काम गरेको देखेर केटाहरूले दाइ अब एमालेबाट लडौं, स्वतन्त्रबाट नलडौं भन्ने कुरा गरे । कार्यकर्ताकै दबाबमा म निर्वाचनमा उठेको हुँ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले आफूलाई एमालेले टिकट नदिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यही बीचमा कांग्रेसले एउटा गेम खेलिदियो अनि काठमाडौंका पत्रिकाले जे पायो त्यही छापे । भएको पनि छापे, नभएको पनि छापे । कांग्रेस र कम्युनिस्टमा फरक छ, कम्युनिस्टमा जे पायो त्यही अभिव्यक्ति दिन सकिँदैन । कांग्रेसमा पैसा भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्टमा त्यस्तो कुरामा अलि गाह्रो छ,’ उनको भनाइ छ ।
उनले आफूले अहिलेसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नभेटेको पनि बताएका छन् । ‘केपी ओलीलाई म मन पराएको भए टिकट दिन उहाँलाई कसले छेक्न सक्थ्यो ? कांग्रेसले दुईनम्बरी धन्दा गर्ने तस्कर तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई त टिकट दिइरहेको छ भने केपी ओलीले मलाईं दिँदा के घाटा थियो र ? म कुनचाहिँ दुईनम्बरी हो, मैले कहाँ तस्करी गरेको छ र ? उहाँहरू खालि डन–सन भनेर आलोचना मात्र गर्नुहुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
उम्मेदवारी दर्ता गर्नु एक महिनाअघि दीपक मनांगे एमाले प्रवेश गरेका थिए । उनलाई एमाले मनाङ एमाले जिल्ला कार्यसमितिले उम्मेदवारको सिफारिस गरेको थियो । तर, पछि उनलाई नदिएर अर्कैलाई टिकट दिइएपछि मनांगेले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । पछि एमाले उम्मेदवारले उनलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ ।
शिक्षा ऐन नवौं संशोधनविरुद्ध तीन विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा